Diiwaan-gelinta Musharraxiinta Madaxtinimada Puntland oo gaba-gaba mareysa – Kalfadhi
Isdiiwaangelinta Musharrixiinta u tartameysa Doorashada Madaxtinimada Puntland ayaa ilaa saakay ka socota magaalada Garoowe ee Xarunta Dowlad Goboleedka Puntland. Ugu yaraan 20 Musharrax ayaa ilaa iyo hadda isdiiwaan-gelisay, kuwaas oo shahaadadooda u ogolaaneysay u tartamidda Jagada Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa ka qaatay Guddiga Doorashada Madaxtanimada Puntland ee shalay looga dhawaaqay Garoowe.
Ugu 7 Musharrax ayaase lagu soo warramayaa iney iska casileen u sharraxnaantoodii Madaxtinimada Dowlad Goboleedka Puntland. Waxaa la rumeysan yahay in Musharrixiinta dooneysa Xilka Madaxweynaha ee ay ka g’an tahay iney tartantanka galaan aysan ka badnaan doonin 20 Musharrax, oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa hadda xafiiska jooga, waxaana haddii ay saas dhacdo ay noqneysaa in ugu yaraan 10 Musharrax ay doorashada iskeed uga hartay.
Magaalada Garoowe ayaa la soo warinayaa in amaankeeda aad loo adkeeyey, islamarkaana ay si weyn u saameysay u diyaar-garowga doorashadaas maalin ka dib ka dhici doonta halkaas. Musharrixiinta oo dhan ayey qasab tahay iney maanta ugu dambeyn isdiiwaan-geliyaan, taas oo qeyb ka ah shuruudaha u tartamayaasha Xilka Madaxtinimada Puntland musharraxnimadooda sharciyeeneysa.
Isniinta berri ah waxaa Garoowe ka bilaan doonta dhageysiga qudbadaha Musharrixiinta loo ogolaaday u tartanka Xilka Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa, iyadoo ay Wakiillada Golaha Baarlamaanka Puntland u diyaar-garoobayaan dhageysiga hadal-jeedintaas. Dabcan, waxay Musharrixiintu soo bandhigi doonaan Taariikh Nololeedkooda iyo Qorshahooda Hogaamineed ee xilka ay u tartamayaan.
Xildhibaan Xidig: Shaqsiyaad wata magac hay'ado ayaa 50% abuura dhibaateynta Soomaaliya